Nagu Saabsan - Central Youth LinkCentral Youth Link
Central Youth Link
Horn Africa Policy Institute (HAPI)
Impact Community Org
CYL Public Depate
Barta Xiriirka Dhallinta BXDH/ CYL waa urur dhallinayaro ah oo la unkay 1dii Luuliyo, 2011, loona unkay in ay isku xiraan dhallinta Soomaaliyeed dal iyo dibad meelkasta oo ay joogaan, si ay uga wada tashadaan aayaha dalkooda iyo dadkooda.
Waxaa shaki la’aan ah in dhallintu ay tahay tiirka kaliya ee usoo haray ummadda Soomaaliyeed kaddib bur bur iyo Dowlad la’aan muddo dheer socotay. Dhallinta laga hadlayo waa kuwa jecel dalkooda iyo dadkooda, kuwaas oo ka madax bannaan qabyaalad iyo maskax shisheeye inataba.
Waxaa nasoo gaaray bur bur baaxad weyn oo dhanka nafta, maalka, aqoonta, garaadka iyo qarannimada intaba naga saameeyay, kaasoo na guddoonsiiyay magacyo badan oo aannaan sababtooda lahayn haddii dib loosii raaco, waana wax laga xumaado in Soomaaliya iyo dadkeedaba lala xiriiriyo ama lagu mataaniyo burcad-badeed, agragixiso, dal guul-darraystay, halka adduunka ugu qatarta badan, musuq-maasuq, macaluul IWM.
Waxaan ogsoonnahay in aan leenahay dad takhakhus, tacliin iyo xirfado gooni ah leh, hase ahaatee aanay maanta saamaxayn in ay helaan fursad ay wax ku toosiyaan, sababo badan oo jira awgood. Waxaad mooddaa in taladii dalkaan iyo dadkaan ay u oodantahay in yar oo kooban oo aan daacad ahayn isla mar ahaantaa aan lahayn ikhtiyaar ay ku jaan gooyaan qorshe qaran.
Waxaa guud ahaanba meesha ka baxay codkii iyo kaalintii shacabweynaha Soomaaliyeed oo maanta doorkiisii kusoo aruuray markhaati aan cidina oranayn, sidee wax u dhaceen? Maxaan ka duwannahay hal nool oo dhurwaayo inta dhulka dhigteen afarta dhinac ku dhagganyihiin? Hadaba si loo helo shacabweyne xog ogaal ah oo hadba qaada tillaabada saxdaa ee loo baahanyahay, ayay lagama maarmaan noqotay in la unko bar xiriirisa codka iyo cududda ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaana dhallinta, si loo helo bulsho abaabulan oo cod leh. Ayadoo taa laga amba qaadayo, ayaa 01/07/2011kii la aas aasay Barta Xiriirka Dhallinta, loona aas aasay ujeeddooyinkan hoose:
Isku xirka dhallinta soomaaliyeed dal iyo dibad, si ay aayaha dalkooda iyo dadkooda uga wadatashadaan una qaataan tillaabada ku habboon ayagoo tixgalinaya danta guud. Ma jiraan wax diidaya in dhallintu ay u istaagto aayo katalinta dalkooda iyo in ay qayb ka noqdaan jaangoynta masaalixda guud ee ummadda.
Ka dhaadhicinta/fahamsiinta in dadkeennu ay leeyihiin aaya katalinta iyo go’aan ka gaaridda dalkooda; war helaa talo hela. Tayo galinta iyo dhiirro galinta shacabku waxay lagama maarmaan u tahay is-badel wanaagsan oo dalka ka dhaca.
Soo celinta, noolaynta, tayaynta iyo sare u qaadidda hiddaha iyo dhaqankeenna, gaar ahaan afkeenna hooyo oo hadda u muuqda in uu sii wiiqmayo. Umadi waxay ummad noqotaa adduunyadana wax la qaybsataa marka ay taqaan meesha ay ka timid iyo dhaqankeeda, taasna waxaa kuu sheegi kara dhaqankaaga, afkaaga iyo taariikhdaada.
Maammulka iyo Qaab-dhismeedka CYL
CYL Waxaa maamula labo Gole, kuwaas oo kala ah, a) Golaha Sare, b) Golaha Talo bixinta iyo Xallinta Khilaafaadka. Golaha sare wuxuu ka kooban yahay todoba (7) xubnood oo labo (2) ay gabdho yihiin kuwaas oo hawlaha CYL u maamula sida ku cad dastuurka ururka. Xubnaha labaada gole waxaa la doortaa sanadkiiba mar, taasoo micneheedu yahay in aysan jirin xubin hayn karata jagada loo doortay in ka badan 12 bilood doorasha la’aan.
Yaa soo doorta Goleyaasha Barta Xiriirka Dhallinta (BXDH/CYL)? Goleyaasha iyo madaxda CYL waxaa soo doorta shirweynaha guud ee CYL kaasoo sanadkiiba 1da July mar la qabto. Kulankaas waxaa isgu yimaada Wakiilada Gobollada, Guddiyada Degmooyinka iyo Labada gole ee CYL oo markaas talada haya kuwaas oo lagu soo doortay shirkaas shirkii ka horreeyay.
Sida ku cad dastuurka CYL, xubin kasta oo lasoo doortay waxay xaq u leedahay in mar kale la doorto haddii lagu qanco gudashada shaqadii hore ee xubintaas. Hayeesha waxaa muhiim ah in aan ogsoonaano qabashada xilalka CYL iyo u adeegidda danta guud in ay tahay mid iskaa ah oo aan mushaar laysku siinayn, waayo waa waajib nafsi ah oo ina saaran in aan dalka iyo dadka u qidmayno. CYL ” Waa Yididiilada iyo Codka Dhalinta Soomaaliyeed”.
Hey’adda Codka Dhallinta Soomaaliyeed (CYL): Bogaadin iyo hambalyo
Dalkeenu Waa Hodan
Ururka isku xirka dhalinyarada (CYL) oo kulan wadatashi ah ugu qabtay Cadaado odayaal iyo dhalinyaro
Dhiirrigelinta Qoraaga Soomaaliyeed
Hoggaamiyuhu Waa Bulshadiisa
Cabdul Axmed on Dhiirrigelinta Qoraaga Soomaaliyeed
mahad on Dabbaaldegga Maalinta Xornimada Soomaaliya oo Ka dhacday Rognan, Norway
Abdullahi on Dabbaaldegga Maalinta Xornimada Soomaaliya oo Ka dhacday Rognan, Norway
Kamidnoqo akhristayaasha website ka. Emailkaaga geli
Archives Select Month September 2015 (1) May 2015 (2) December 2014 (1) June 2014 (1) March 2014 (1) November 2013 (1) October 2013 (1) July 2013 (1) October 2012 (1) September 2012 (2) July 2012 (9) June 2012 (1)
Categories Select Category Youth (22)
© 2012 Central Youth Link, All Rights Reserved.